ဝူဟန်ရွှေ laser Co. , Ltd မှ - သူတော်ကောင်းတရားအားကစားဝတ်စုံ, ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အထည်, ဒစ်ဂျစ်တယ် Printed အဝတ်အစား၏လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း
သူတော်ကောင်းတရားအားကစားဝတ်စုံ, ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အထည်, ဒစ်ဂျစ်တယ် Printed အဝတ်အစား၏လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း
မြန်နှုန်းမြင့်ပျံထည်တစ်ခု sublimated လိပ် scan နဲ့အကောင့်ထဲသို့သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆိုကျုံ့သို့မဟုတ်ပုံပျက် ယူ. တိကျစွာမဆိုဒီဇိုင်းများထွက်ခုတ်ဖြတ်။
ဆိုးဆေး-သူတော်ကောင်းတရား Trend ဖက်ရှင်, ကြံခိုင်ရေးနှင့်အားကစားဆိုင်ရာအဝတ်အစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမောင်းနှင်နေသည်။
အဝတ်နှင့် On-လမ်းကြောင်းသစ်ဖက်ရှင်-ရှေ့ဆက်ဖြစ်ကြောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, တစ်ချိန်တည်းမှာအဆင်ပြေခြင်းနှင့် functional စဉ်အမြဲလိုက်လျက်ရှိသည်။ Sublimated အဝတ်အစားအားလုံးကြောင်းနှင့်ပိုပြီးပေးပါသည်။
အဝတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဖက်ရှင်သဘောမျိုးများအတွက်ဝယ်လိုအားကိုအလွန်သူတော်ကောင်းတရားအဝတ်အစား၏ကျော်ကြားမှုအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။ ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပေမယ်ပင် activewear, ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစားများနှင့်အားကစားအဝတ်အဖြစ်ယူနီဖောင်းမသာကလက်တွေ့ကျကျမပါဒီဇိုင်းန့်အသတ်နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးကတည်းကစက်မှုလုပ်ငန်းများကဤဝတ္ထုဆိုးဆေး-သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်နည်းပညာအဘို့ကြီးသောအကြိုက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးဆောင်လေဆာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်အတိုင်းရွှေလေဆာကိုအလိုအလျောက်လိပ်ထဲမှာထိပ်ပိုင်းမြန်နှုန်းဖြတ်တောက်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားအထည်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရူပါရုံကိုလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်း system ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အတူရွှေလေဆာအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အများဆုံးတန်ဖိုးကိုဖန်တီးအလေးပေး။
ဂျာစီ (ဘတ်စကက်ဘောဂျာစီ, ဘောလုံးဂျာစီ, ဘေ့စ်ဘောဂျာစီ, ဟော်ကီ)
ကခုန် wear / ယောဂ wear
ထိုရူပါရုံ laser ဖြတ်စနစ်ကအားကစားအတွက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုများကဲ့သို့မတည်မငြိမ်သို့မဟုတ်ဆွဲဆန် ့. အထည်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမဆိုပျက်ယွင်းခြင်းနှင့်ပို်များအတွက်လျော်ကြေးပေးအပ်အလျင်အမြန်နဲ့တိကျစွာထည်သို့မဟုတ်အထည်အလိပ်၏ဆိုးဆေးသူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်အပိုင်းပိုင်းအထဲကဖြတ်တောက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်။
သူတော်ကောင်းတရား activewear ၏လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း
သငျသညျ (ရေကူးဝတ်စုံစသည်တို့ကိုဥပမာအသင်းဂျာစီ) အားကစားအဝတ်အစားနှင့်အတူရအတိအကျအမျိုးအစား - ဗွီး laser ဖြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွဲဆန် ့. နဲ့အလွယ်တကူပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ပစ္စည်းများဖြတ်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အထူးသဖြင့်အားကစားဖြတ်တောက်ဘို့စံပြဖြစ်
ပုံဗွီး laser ခုတ်အလုပ်လုပ်?
အလုပ်မှာ MODE 1
ယင်ကောင် ON →စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း
tool တစ်ခုခြင်းနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ် Save
အမြင့်အထွက် (ပြောင်းကုန်ပြီနှုန်းတစ်နေ့လျှင်ဂျာစီ 500 အစုံ - သာရည်ညွှန်းများအတွက်)
အလုပ်မှာ MODEL 2
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း REGISTRATION Mark →
ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖျက်ဖို့လွယ်ကူပျော့ပစ္စည်းများ, အဘို့, တိုးချဲ့
ရှုပ်ထွေးပုံစံ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြတ်တောက်သည့်အကြမ်းဖျင်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျအတှငျးရှိ nesting များနမူနာပုံစံများအတွက်
ကင်မရာများ, အထည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရှာဖွေပြီးပုံနှိပ်ပုံကိုအသိအမှတ်မပြု, ဒါမှမဟုတ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ပေါ်တက်ကောက်နှင့်အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူရွေးကောက်တော်မူသောဒီဇိုင်းများကိုခုတ်ဖြတ်။
မြန်နှုန်းမြင့်မှာတိကျမှုဖြတ်တောက်ခြင်း။ သန့်ရှင်းပြီးပြည့်စုံသောဖြတ်အနား - လိုအပ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအပိုင်းပိုင်းအဘယ်သူမျှမ reworking ။
ယင်းလိပ်ကနေတိုက်ရိုက် processing အပြည့်အဝ-အော်တိုလေဆာအဘို့အပေါ်ကိုစနစ်နှင့်အလိုအလျောက်လမ်းခွဲ။
ရွှေလေဆာနက်ရှိုင်းစွာအားကစား၏လယ်ပြင်တွင် Processing တောင်းဆိုမှုတွေစူးစမ်းထားသည်, နှင့်အားကစား၏အပြောင်းအလဲနဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်အလိုအလျောက်လေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီးရီးဖြန့်ချိခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းစေသည်, အလုပ်သမားနှင့်အချိန်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးကယ်တင်တော်မူ၏။
GOLDEN CAD Vision ၏ Scanning ကိုလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
GOLDEN သည် CAM ကင်မရာမှတ်ပုံတင်ရေးလေဆာ Cutter စက်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Galvo & Gantry လေဆာတန်းဖောက်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်
ကျနော်တို့လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, လေဆာထွင်းထု, လေဆာရောင်ခြည်တန်းဖောက်ခြင်းနှင့်လေဆာ marking အပါအဝင်ပြည့်စုံလေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ, ရှိသည်။
တာဝန်ခံ၏အခမဲ့, သင်၏ပစ္စည်းများစမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဉ်ပိုကောင်းအောင်, ဗီဒီယို, အပြောင်းအလဲနဲ့ parameters တွေကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. ပေး။
အသုံးပြုသူများကတီထွင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးကူညီရန်အလိုအလျောက်နှင့်အသိဉာဏ်လေဆာ application ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်း။